Mdg.milk.agruculture.rice.rural dev... by Zaw Aung 1521 views
Wc.germany.2014.articles by Zaw Aung 276 views
JOKO WIDODO INDONESIA PRESIDENT ELECTION 2014
1. 7/13/2014 JOKOWI Indonesia http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm 1/10 သစ်တောအင်ဂျင်နီယာ၊ တခါကပရိဘောကလုပ်ငန်းရှင်၊ ဂျာကာတာအုပ်ချုပ်ရေးမှုး-လဘ် စားမှုကင်းသူ၊ လာဘ် စားသူများနဲ့လည်းအတူအလုပ်လုပ်နိုင်သူ၊ ပြည် သူကြားထဲဆင်းတဲ့ ၊ လူထုနိုင်ငံရေးသမား အင်ဒိုနီးရှားလူထုက သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ် ထားပါတယ် ။ ၅၃-၄၇% နဲ့နိုင်တယ် ဆိုတာ ရွေးကောက် ကော် မရှင်ရဲ့ အတည် ပြုချက် စောင့်နေပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ရှုံးသွားတဲ့ စစ်ဗိုလ် ချုပ်ဟောင်း ပရာဗိုဝိုက ၄၇%တောင် ရတယ် ဆိုတော့ ၊ စစ်အာဏာရှင်များကိုထောက် ခံသူတော် တော် များတယ် ။ တောရွာများက ပေးဆိုကြောက် လို့ပေးရတာတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ် ။ လူထုဆန္ဒယူပွဲ အစဦးမှာ ဂျိုကိုဝီအပြတ် အသတ် ဦးဆောင်ခဲ့ပေမဲ့၊ ရွေးကောက် ပွဲ၃ပတ် အလိုမှကျ မှငွေ-အာဏာရှင်များက စစ်ဗိုလ် ချုပ်ဟောင်း ပရာဗိုဝို ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးမှုကြောင့် ၄၇%အထိကပ်လိုက် လာပါတယ် ။ တကယ် မေးရေတွက် ချိန်မှာလဲ ခန့်မှန်းချက် အတိုင်း ဖြစ်လာတာ တွေ့ရပါတယ် ။ . ဂျိုကိုဝီပါတီက အနိုင်ရတယ် ကျေ ညာပြီး၊ ချက် ချင်းပဲ ပရာဗိုမိုပါတီကလည်းသူတို့အနိုင်ရပြီလို့ ကြေညာလိုက် ပြန်ပါတယ် ။ အုပ်စု၂ခုတိုင်းပြည် မငြိမ်မသက် မဖြစ်အောင် စိတ် ရှည် စွာနဲ့ ရွေးကောက် ကော် မရှင် ထုတ် ပြန်ချက် ကိုစောင့်ကြပါလို့ လက် ရှိသမ္မတ ယိုဒိုရိုနိုက တစ်ဦးချင်းတွေ့ဆုံး ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။ အခု ရွေးကောက် ပွဲပြီးလို့ ရက် အနည်းငယ် ကြာချိန် နှစ်ဘက် အုပ်စုဆူပူမှုများကိုထိန်းချုပ်လျှ က် ရှိပါတယ် ။ . မြန်မာပြည် အတွက် အားရစရာပါပဲ။ အင်ဒိုနီးရှားမှာ လက် ရှိသမ္မတ ယိုဒိုရိုနို ၁၀နှစ် (၂ကြိမ်သက် တမ်း) လုပ်ခဲ့သူက စစ်တပ်အရာရှိများကိုထိမ်သိမ်းပေးပါတယ် ။ တရာမျှတမှုကိုဖြစ်စေပြီး၊ သီခြားလွတ် လပ်တဲ့ မဲရေတွက် ၊ ခန့်မှန်းတဲ့ အဖွဲ့များကလည်းတရားမျှတရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊ မဲလိမ်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကြိုတင်မဲ ပုံစံ နည်းပါတယ် ။ ရလဒ်တွေ ပြောင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ရွေးကောက် ပွဲ စောင့်ကြည့် အဖွဲ့ ၂၀ကျော် ရှိပါတယ် ။ ၂၀၁၅ မြန်မာရွေးကောက် ပွဲ ကြီးကြပ်မဲ့ စစ်တပ်အရာရှိများ တရားမျှတစွာ ကျ င်းပပေးမဲ့
2. 7/13/2014 JOKOWI Indonesia http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm 2/10 အလားလာတွေ့ရပါတယ် ။ . ရွေးကောက် ပွဲ မဲဆွယ် ခြင်း၊ စကားပြောခြင်းများမှာ သမ္မတလောင်း ၂ဦးစလုံး ပြည် သူလူထုနဲ့ ထိတွေ၊ သူတို့ယဉ်ကျေးမှုအရ ဘယ် ညာ၊ ပါးချင်းထိ၊ လက် နဲ့နှုတ် ဆက် ခြင်း၊ ကလေးများကိုနမ်းရှုံ့နှုတ် ဆက် ခြင်း စတဲ့းလူထုနဲ့နီကပ်စွာ ဆက် ဆံခြင်းများဟာ အလွန်အားကျ စရာကောင်းပါတယ် ။ ဗိုလ် ချုပ်ကြီးဟောင်း၊ သန်းကြွယ် မဟာသူဌေးကြီး ၊ ပရာဗိုမိုလည်းပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ ဟန်ပန်ကိုတွေ့ရပါတယ် ။ . ရွေးကောက် ကော် မရှင် ကျေ ညာတဲ့ 22-Jul-2014 အဆုံးထိစောင့်ကြည့် ရပါတယ် ။ အများစုကတော့ (ငွေ- အာဏာရှင်များ မတရား မလုပ်နိုင်ရင်တော့ ) ဂျိုကိုဝီအနိုင်ရရှိသွားပြီလို့ ဆုံးဖြတ် ကြပါတယ် ။ . Indonesian presidential candidate Joko Widodo, popularly known as "Jokowi", left, and his wife Iriana, show their inked fingers after casting their ballots during the presidential election in Jakarta, Indonesia, Wednesday, July 9, 2014. As the world's third-largest democracy began voting Wednesday to electanew president, Indonesians are divided between two very different choices:aone-time furniture maker, Jakarta Governor Joko Widodo, andawealthy ex-army general with close links to former dictator Suharto, Prabowo Subianto. သြစတြေလျ ဝန်ကြီးချုပ် Aony Abbott ကတော့ ငြိမ်းချမ်းစွာပြီးသွားတဲ့ ရွေးကောက် ပွဲကိုချီးကျူးလိုက် ပါတယ် ။ ဆစ်ဒနေအခြေစိုက် အကဲဖြတ် များကတော့ ဂျိုကိုအနိုင်ရသွားပြီလို့ ပြောကြပါတယ် ။ ဂျိုကိုဟာ သြစကြေးလျားလူထုနှစ်သက် သူဖြစ်ပါတယ် ။ အင်ဒိုနီးရှားပြည် သူလူထုကလဲ စစ်အာဏာရှင်အရိပ်ရှိတဲ့ ပရာဗိုမို ထက် ၊ အရပ်သားမျက် နှာသစ် ဂျိုကိုကိုပဲ ကြိုက် နှစ်သက် ကြတယ် လို့ ဆိုပါတယ် ။ သြစတြေးလျားနဲ့အင်ဒိုနီးရှား နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး အဆက် အသွာ များစွာရှိနေပါတယ် ။ (Jakata Globe) မိုးမခသတင်းဆောင်းပါး (Photo: AP Photo/Dita Alangkara)
3. 7/13/2014 JOKOWI Indonesia http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm 3/10
4. 7/13/2014 JOKOWI Indonesia http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm 4/10 ******************* This story, posted at Moemaka ဇူလိုင်၉ရက် တွင် အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ရွေးကောက် ပွဲကျ င်းပတော့ မည် အင်ဒိုနီးရှားသည် လူဦးရေသန်းပေါင်း ၂၄၀ကျော် ၊ ကျွ န်းပေါင်း တစ်သောင်းခုနှစ်ထောင်ကျော် ၊ မဲပေးနိုင်သူ၇၅သန်း မှ တိုက် ရိုက် ရွေးချယ် တော့ မည် ဖြစ်သည် ။ အရပ်သားအင်ဂျင်နီယာဘဝမှာ ဂျာကာတာမြို့ဝန်သို့ တက် လှမ်းလာခဲ့သူဂျိုကိုဝီဟုခေါ်ခံရသူနှင့်စစ်ဗိုလ် ချုပ်ဘဝမှ အစိုးရဝန်ကြီး၊ ရာထူးကြီးများရရှိလာသူပရာဗိုမိုတို့ပြိုင်ကြမည် ။ ဆန့်ကျ င်ဘက် ၊ အသွင်မတူသူ၂ဦး၊ တစ်ဦးကို ပြည် သူများက သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက် ရပေတော့ မည် ။ လက် ရှိသမ္မတ ဗိုလ် ချုပ်ကြီးဟောင်း ယိုဒိုယူနိုသည် ၅နှစ် ၂ကြိမ်သမ္မတရွေးခံရပြီးသည့် နောက် ၊ ထပ်မံအရွေးမခံရတော့ ပေ။ ၁၉၉၈ အင်ဒိုနီးရှား အာဏာရှင်ဗိုလ် ချုပ်ကြီးဟောင်း၊ ဆူဟာတိုမဖြစ်မနေ၊ အနားယူသွားပြီးနောက် သမ္မတ၄ဆက် တာဝန်ယူခဲ့ကြသည် ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလည်းနှစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ခဲ့ပြီး လွှတ် တော် တွင် စစ်တပ်ပါဝင်မှုကို လျှော့ ချခဲ့သည် ။ သမ္မတကိုလည်းတိုက် ရိုက် ရွေးချယ် သော စနစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည် ။ စစ်တပ်နှင့်ဗိုလ် ချုပ်ကြီးဟောင်းများ နိုင်ငံရေးတွင် စိုးမိုးနေဆဲဖြစ်သည် ။ အထူးသဖြင့် ယခု၁၀နှစ် သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော SBY ဟုခေါ်ကြသော သမ္မတယိုဒိုယိုနိုသည် အဂတိလိုက် စားမှုကိုတိုက် မည် ဟုလက် သီးလက် မောင်းတန်းကာ သမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည် ။ လက် ရှိအာဏာနှင့်ရာထူး ရရှိထားသူများ၏ ဖိအားပေးမှုကိုသမ္မတကိုယ် တိုင် တောင့်မခံနိုင်သောကြောင့်၊ အဂတိလိုက် စားမှုများကိုပြောသလို၊ လုပ်မရနိုင်ဖြစ်နေသည် ။ အင်ဒိုနီးရှားအချမ်းသာဆုံး Bakris ဆိုသူသူဌေးကြီးကို ဂိုကာပါတီက ဥက္ကဌခန့်ထားပြီး၊ နာမည် ပျက် များထွက် နေသည့် ကြားက သူ့ကိုပင် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ ညီညွတ် ရေးဟု ဆိုကာ၊ သူ့ကိုပင် ရာထူးကြီးကိုတိုးပေးထားရသည် ။ နာမည် ကောင်းရပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလိုလားသော ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Sri Mulyani ကိုရာထူးမှဖယ် ရှားခံရသည် ။ PR ရွေးကောက် ပွဲကိုကျ င့်သုံးသောကြောင့် သမ္မတ၏ ပါတီလည်းလွှတ် တော် တွင် မဲအများစုမရှိသဖြင့် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖြစ် အုပ်ချုပ်နေရသည် ။ ထို့ကြောင့် အဂတိလိုက် စားမှုတိုက် ဖျက် ရေးမှာ ခက် ခဲနေဆဲဖြစ်သည် ။ ခြုံကြည့် လျှ င် သမ္မတ ယိုဒိုရိုနိုအစိုးရသည် ဒီမိုကရေစီလမ်းကိုအတိုင်တာတစ်ခုအထိ ဖော် ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည် ။ အမြင်ချင်းမတူသော သမ္မတလောင်း ၂ဦးမှာ တီဗွီစကားစစ်ထိုးခြင်း ၅ကြိမ်လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်သည် ။ မဲစစ်တမ်းကောက် မှုများတွင် ယခင်က ဂျိုကိုဝီအပြက် အသာရရှိသော် လည်း၊ ယခုအခါ ဂျိုကိုဝီနှာတဖျားအသာဖြင့်သာ ဦးဆောင်နေသည် ။ မည် သူအနိုင်ရမည် မသေချာတော့ ။ မဲဝယ် ရွေးကောက် ပွဲမသမာမှုများဖြင့် နည်းပါးမည် ဟု ဆိုသော် လည်း၊ စစ်တပ်အရာရှိများက ပရာဗိုမိုကိုမဲထည့် ရန် ဆွယ် နေကြသဖြင့် သမ္ပတကိုယ် တိုင်က နိုင်ငံရေးလုပ်လိုပါက စစ်တပ်မှထွက် ပြီးလုပ်ရန် သတိပေးရသည် ။ ဂျိုကိုဝီမှာ ပြည် သူလူထုကြားသို့ ဟိတ် ဟန်မရှိဝင်ထွက် သွားလာ၊ အကြံယူပြီး အုပ်ချုပ်သည့် စနစ်ဖြစ်သည် ။ ပရာဗိုမိုမှာ ပြည် သူလူထုကိုလမ်းညွှန်ပြသအုပ်ချုပ်သော စနစ်ဖြစ်သည် ။ အဂတိလိုက် စားမှုများဖြင့် အောက် ခြေအဆင့်မှ၊ ထိပ်တန်းရာထူးများအထိအဂတိမကင်းနိုင်အောင် ဖြစ်နေသောကြောင့် နောက် အစိုးရတက် လာလျှ င် သိသာသော အပြောင်းအလဲများကိုပြည် သူများက မျှော် လင့်ကြသည် ။ အဂတိတိုက် ဖျက် ရေးကောမရှင် (KPK) လည်းသမ္မတမှ
5. 7/13/2014 JOKOWI Indonesia http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm 5/10 အကာကွယ် မပေးထားသဖြင့် ထိထိရောက် ရောက် မဆောင်ရွက် နိုင်ဖြစ်နေသည် ။ ထိုနှစ်ဦးကိုပြည် သူများက တိုက် ရိုက် ရွေးချယ် ကြမည် ။ အင်ဒိုနီးရှား အပြောင်းလဲသည် မြန်မာပြည် အတွက် စံထားရသဖြင့်၊ မြန်မာနိုင်ငံရေးအတွက် စိတ် ဝင်စားစရာ ဖြစ်ပါသည် ။ မိုးမခသတင်းဆောင်းပါး (Photo: the Voice) ********************* General Elections Commission (KPU) on July 8, 2014 at 9:14 am Wealth announced by election commission (here – converted to US$). Prabowo Subianto owner of 20 business companies which worth US $147.7 millions. While Jokowi wealth is US$ 1.6 million. Indonesia politician has to declare their wealth. Winner will most likely be known tomorrow evening. Election survey LSI poll ,Jokowi lead 46-42 per cent. But late surge – retired general Probowo could win by 53-47 per cent. Link http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm ******************* This story, posted at Moemaka အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားစတိုင် အင်ဒိုနီးရှားခေါင်းဆောင် (Published at Moemaka Magazine & the Voice news paper in Yangon)
6. 7/13/2014 JOKOWI Indonesia http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm 6/10 JOKOWI ပိုစတာဖြစ်ပါသည် ။ အင်ဒိုနီးရှား၊ လက် ရှိဂျာကာတာမြိုတော် ဝန် ဂျိုကိုဝီဟုလူသိများပြီး၊ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးလဲ ဖြစ်ပါသည် ။ လောလောဆယ် ၁၃ ဇန္နဝါရီ၂၀၁၄ ဂျာကာတာ ရေလွှမ်းမိုးကာ အိမ်ပေါင်း ၇ထောင်ကျော် ရေမြုတ် နေပြီး၊ လူပေါင်း ၂၅၀၀၀ ရေဘေးဒုက္ခရောက် နေပါသည် ။ " ရေဆီးတားတွေ ပြင်ဖို့ ယန္တရားကြီးတွေနှင့် လုပ်နေပါတယ် ။ မြစ် ၁၃ခုမြို့ထဲစီးဝင်တဲ့ ရေတွေဖြစ်ပါတယ် ။ ရေရှည် မှာ ဒါမျိုးမဖြစ်အောင် အနီးနားက သစ်လုပ်ငန်းများက သစ်တောခုတ် လှဲများ ရပ်ဆိုင်းပြီး စိမ်းလန်းတဲ့ သစ်တောဖြစ်ဖို့ အစိုးရ၏ အကူညီလိုပါတယ် ။ မြို့သူမြို့သားများလဲ မြောင်းများ မပိတ် ဆို့ဖို့ အမှိုက် စနစ်တကျ ပစ်ဖို့ လိုပါတယ် ..." ဟု မြို့တော် ဝန် ဂျိုကိုဝီကပြောပါသည် ။ ဒါတွေ လုပ်ဖို့ ဂျာကာတာမြို့အဖွဲ့နှင့်မရပါ၊ ဗဟိုအစိုးရလည်းပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပေးဖို့ လိုကြောင်း ပြောပါသည် ။ ရေစုတ် ပန့်များစွာ အလုပ်လုပ်လျှ က် ရှိကြောင်း၊ ဂျာကာတာ မြို့နယ် ပေါင်း ၃၁ ခုမှာ ရေကြီးနေကြောင်း၊ ဂျာကာတာ ရဲဌာနမှသတင်းထုတ် ပြန်ပါတယ် ။ သူ့ကိုဂျာဗားကျွ န်းအလယ် က လူဦးရေ၅သိန်းခန့်ရှိသော ရှေးဟောင်းမြို့တော် Surakarta မြို့တွင် ၁၉၆၁ မွေးဖွားခဲ့ပါသည် ။ ယခု၅၂ နှစ်အရွယ် ဖြစ်သည် ။ ၁၉၈၅ သစ်တောဆိုင်ရာ၊ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရရှိပြီး နောက် ပိုင်း ကုမ္ပဏီအလုပ်၊ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာ လုပ်ခဲ့ပါသည် ။ ဆူကရာတာမြို့ဝန် ရာထူး အတွက် သူ့ကိုယှဉ်ပြိုင်စေရာမှာ အနိုင်ရရှိပြီး ၂၀၀၆ ဆူကရာတာမြို့ဝန်ဖြစ်လာပါသည် ။ သာမန် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး မြို့ဝန်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ပါ့မလား သံသယဖြစ်ခဲ့ကြသည် ။ လက် ရှိ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ယူဒိုယိုနိုမြို့ဝန်လုပ်ခဲ့ဖူးသော မြို့လည်းဖြစ်ပါသည် ။ သူတာဝန်ယူပြီး မကြာခင် သူ့၏ အရည် အချင်များကိုတွေ့လာရပါသည် ။ သူလုပ်ငန်းရှင်အဖြစ် ဥရောပမြို့တော် တော် များများကို ရောက် ခဲ့စဉ်က ထိုမြို့များ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်မှုနမူနာများစွာအတုယူပြီဆူကရာတာမြို့အတွက် သင့်လျှော် အောင် ကော် ပီလုပ်ဆောင်စေပါသည် ။ သူနိုင်ငံခြား သွားလာနေစဉ်ကာလ သူများနိုင်ငံမှာ ဘယ် လိုလုပ်ကိုင်သည် ဆိုတာ သေသေချာချာ လေ့ လာ၊ ဆည်းပူးခဲ့ပါသည် ။ ထိုကဲ့ သို့လေ့ လာပြီး မှတ် တမ်းတင်မှုများသည် သူကိုယ် တိုင် မြို့တော် ဝန် ဖြစ်လာချိန်တွင် လက် တွေ့ကျ င့်သုံး၊ အကောင်ထည် ဖေါ်နိုင်ခဲ့ပါသည် ။ သူသည် ယခင် အင်ဒိုနီးရှားခေါင်းဆောင်များလိုဟိတ် ဟန်မရှိ၊ ပုံစံခြားနားပါသည် ။ ပြည် ထုနှင့် တွေ့ဆုံပွဲများတွင် လူငယ် များက ဂျိုကိဝီလက် ကိုဆွဲပြီး သူတို့ခေါင်းပေါ်တင်ကြပါသည် ။ အင်ဒိုနီးရှားစတိုင် လူငယ် တွေက လူကြီးကိုလေးစားကြောင်း ပြခြင်းဖြစ်သည် ။ ဆူရာကာတာမြို့ဝန်အဖြစ်မှတ် တမ်းတင်လုပ်ဆောင်မှုများ - သူ့မိသားစုကိုမြိုတော် ၏ ကန်ထရိုက် တွင် လုံးဝ၊ တင်ဒါမဆွဲခိုင်းပါ။ အဂတိလိုက် စားမှုမရှိ၊ သန်ရှင်းခြင်း။ - မြို့၏ ရိုးရာမပျက် ဈေးကြီးတည် ထောင်ပေးခြင်း၊ ဈေးဆိုင်များမှာ ရှေးဟောာင်းပစ္စည်းဆိုင်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းဆိုင်များပါဝင်ပါသည် ။ - မြို့လည် ခေါင် လမ်းမတွေကြား လူများလမ်းလျှောက် ဖို့ ၃မီတာကျ ယ် ပြီး၊ ၇မီတာရှည် လမ်းကိုတည် ဆောက် ပေးခြင်း - မြို့၏ ပန်းခြံကြီးနှစ်ခုကိုစည် ပင်သာယာ၊ လှပအောင် အပမ်းဖြေစခန်းအဖြစ် ပြုပြင်တည် ဆောက် ခြင်း
7. 7/13/2014 JOKOWI Indonesia http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm 7/10 - မြို့ထဲမှသစ်ပင်၊ သစ်ကိုင်းများ ခုတ် ခြင်းကိုဥပဒေဖြင့်တင်းကျ ပ်စွာ ထိန်းချုပ်ခြင်း - "ဂျာဗားစိတ် ဓါတ် " ဆိုင်းဘုတ် နှင့် ဂျာဗာကျွ န်းယဉ်ကျေးမှုကိုမြှင့်တင်ပြီး၊ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း တိုးတက် စေခြင်း - မြို့ကိုဆွေးနွေးပွဲများ၊ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ ပြပွဲများ၊ ကြော် ငြာပွဲများ ဗဟိုအဖြစ် မြှင့်တင်ပေးခြင်း - သူကိုယ် တိုင် မြို့အနှံ့အပြားအရောက် သွားပြီး၊ ဒေသခံလူများ၏ လိုအပ်ချက် နှင့် အပြစ်တင်ခြင်းကို ကိုယ် တိုင်နားထောင်ခြင်း - ကျ န်းမာရေးအာမခံ ထားခြင်းကိုမြို့သူ၊ မြို့သား အားလုံး ပါဝင်စေခြင်း၊ - မြို့လူထုသယ် ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် ၂ထပ်၊ ဘတ် စ်ကားကြီးများ၊ မိုနို ရထားလမ်းများ ပြေးဆွဲစေခြင်း - Solo Techno Park စက် မှုဇုံတစ်ခုတည် ဆောက် ပြီး အင်ဒိုနီးရှားလုပ်၊ မော် တော် ကားများကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည် ။ "Solo: The Spirit of Java" ဆိုင်းဘုတ် အောင်မြင်စွာ၊ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည် ။ မြို့ထဲမှာရှိသော အဟောင်းပစ္စည်း၊ ဈေးဆိုင်အားလုံး မြို့ပြင် ဥယဉ်တခုဆီရွှေ့ခြင်းကိုတဖြေးဖြေး၊ ညင်သာစွာ ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပါသည် ။ မြို့ကြီးများအင်္ဂျါနှင့် အညီမြို့လည် မှာ သစ်ပင်များ စိမ်းစိမ်း၊ စိုစိုစိုက် ထားဖို့ နေရာများကိုဖန်တီးခဲ့ပါသည် ။ မြို့လည် ခေါင်လည်းပြန်လည် စိမ်းလန်းစိုပြေ လာပါသည် ။ မြို့ကမ္ဘာ့ အဆင့်မီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် စီးပွားရေးသမားများပါဝင်လာရာတွင် မမှန်ကန်သော ရင်းနှီးမြှတ် နှံမှုများကို မြို့ကန်ထရိုက် လုပ်ငန်းများမှထုတ် ပယ် ပစ်ပါသည် ။ မကြာခင် ၂၀၀၆ခုနှစ်မှာ ဆူကရာတာမြို့ကို ကမ္ဘာ့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေခံမြို့များအဖွဲ့အစည်းOrganization of World Heritage Cities ၏ အသင်းဝင်အဖြစ် လက် ခံခဲ့ပါသည် ။ ထို့နောက် ကမ္ဘာ့ အဖွဲ့အစည်း၏ ပွဲတော် ကြီးများ ဆူကရာတာမြို့မှာ ကျ င်းပခဲ့ပါသည် ။ ၂၀၀၈မှာ ကမ္ဘာတေးဂီတပွဲတော် ကြီးကိုကျ င်းပနိုင်ခဲ့ပါသည် ။ မြို့၏ သမိုင်းဝင်မှတ် တမ်းတင်နေရာများကို မြှင့်တင်ပေးပြီး၊ အသုံးမကျ တဲ့ နေရာများကိုဘူတိုဇာနှင့် တိုက် ဖျက် ဖို့ ဆုံးဖြတ် ချက် များစွာ ချမှတ် ခဲ့ပါသည် ။ ဂျိုကိုဝီ၏ စတိုင်မှာ "Can-do" လုပ်နိုင်ပါသည် .. ဆိုသည့် အတိုင်း၊ အောင်မြင်စွာ မြို့ရပ်မိဘများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည် ။ အထူးသဖြင့် လူငယ် များ၏ တခဲနက် လုပ်အားပေးမှုများ တွေ့ရပါသည် ။ မြို့ရပ်လူထုရွေးကောက် တင်မြှောက် ခံထားသူများ သွေးစည်းစေပြီး၊၊ လက် တွေ့လုပ်ဆောင်ရာတွင်လဲ အောင်မြင်ပါသည် ။ သူကိုယ် တိုင် အခက် အခဲများကိုပါဝင်၊ ကျော် လွှားဆောင်ရွက် ပါသည် ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မြို့တော် မြူနီစပါယ် က လျှ ပ်စစ်ဓါတ် အား ကော် ပိုရေးရှင်းကိုဓါတ် အားခငွေ ကန်ဒေါ်လာ တစ်သန်းနီးပါး အကြွေး ပေးစရာရှိပါသည် ။ ခရစ်စမတ် ပွဲကိုတမြို့လုံး ပျော် ရွှင်စွာ ဆင်နွဲနေသည့် ညမှာ အစိုးရလျှ ပ်စစ်ကော် ပိုရေးရှင်းက မီးဖြတ် တောက် လိုက် ပါသည် ။ မြို့ မြူနီစပယ် အဖွဲ့က အကြွေးပေးဖို့ ချက် ချင်းဆုံးဖြတ် ပြီး ထိုကဲ့ သို့ အတင်းအကြပ် အကြွေးတောင်းတာမျိုး နိုင်ငံတော် လျှ ပ်စစ်ကော် ပိုရေးရှင်းက နောက် နောင်မလုပ်ဖို့၊ မြို့သူမြို့သားများဖက် ကလည်းပြန်ကြည့် သင့်ကြောင်း ကန့်ကွက် စာထုတ် ပါသည် ။ ဒေါ်လာတစ်သန်းနီးပါး အင်ဒိုနီးရှားငွေများ အထုပ်ပေါင်းရာနှင့်ချီစုဆောင်းပြီး၊ လျှ ပ်စစ်ဓါတ် အားကော် ပိုရေးရှင်း ရုံးကိုမြို့တော် ဝန် ဂျိုကိုဝီကိုယ် တိုင် သွားပေးခဲ့ပါသည် ။ ပြဿနာများ ခေါင်းခံစရာရှိလျှ င် ကိုယ် တိုင် ဝင်ရှင်းပေးသူ ဖြစ်ပါသည် ။
8. 7/13/2014 JOKOWI Indonesia http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm 8/10 ဂျာကာတာမြို့ဝန်အဖြစ်ရွေးခံရခြင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ၁၀သန်းရှိသော ဂျာကာတာမြို့ဝန် ရာထူးကိုလက် ရှိမြို့တော် ဝန်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရာ အနိုင်ရရှိပြီး၊ အရွေးခံရပါသည် ။ သူ၏မြို့ ဆူကရာတာမြို့ဝန် ရာထူးကိုလဲ မဲပေါင်း ၉၀%ဖြင့် ဒုတိယသက် တမ်း ဆက် အရွေးခံရသည့် အတွက် ဆူကရာတာမြို့ဝန်ရာထူးကိုလက် ထောက် ဖြစ်သူ လွှဲပေးပါသည် ။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ မြို့တော် ကြီး ဂျာကာတာကိုပြုပြင်ပြောင်လဲဖို့ ပိုအရေးကြီးပါသည် ။ ယခုဂျာကာတာမြို့ဝန်အဖြစ် ရွေးကောက် ခံရပြီး၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်မှာလဲ ဘာမှထူးခြားစွာ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ တခုပဲ..သူ့၏ ပွင့်လင်းမြင်သာ စတိုင်ဖြစ်တဲ့ မြို့ရပ်၊ လူထုများနဲ့ ထိတွေ့ရ လမ်းကြားတွေထိသွာပြီး၊ စကားပြော၊ သူတို့၏ တိုင်တန်းချက် များကိုနားထောင်ခြင်းကိုဆူကရာတာမြို့ဝန် လုပ်ခဲ့စဉ်ကအတိုင်းပါပဲ။ ဒီနည်းနှင့် လူများ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ် ကိုအားပေးလှို့ဆော် ပါသည် ။ ရာထူးလက် ခံပြီး ရက် ၁၀၀ အကြာမှာ ဂျာကာတာပိုစ် သတင်းစာကြီးက အရည် ချင်းရှိသူဖြစ်ကြောင်း၊ ထောက် ခံရေးသားပါသည် ။ သူ့၏နည်းလမ်း၊ ပုဂ္ဂိုလ် ရေး၊ လုပ်ငန်းပေါ်လစီနှင့် လူထုဆီထိအောင် သွားရောက် ခြင်းသည် အလွန်ထိရောက် ကြောင်း၊ သူ၏ အခမဲ့ကျ န်းမာရေးပေါ်လစီ၊ အခမဲ့ပညာရေးပေါ်လစီများ၊ ဂျာကာတာမှာ မြေအောက် လှိုင်ဂူကားလမ်းကြီးဖောက် ရန်၊ မြို့တွင်း ကားကြပ်မှုအတွက် မြို့ထဲဝင်တဲ့ ကားများ အခွန်ကောက် ခြင်း ERP စနစ် စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ အခက် ခဲများရှိသော် လည်းကျေ နပ်ကြောင်း၊ ဂျာကာတာမြို့သားများ၏ မှန်ကန်သော ရွေးချယ် မှုဖြစ်ကြောင်း ချီးကျူးခဲ့ပါသည် ။ ဂျာကာတာမှာ ကျ န်းမာရေးအာမခံ ၂၀၁၂ စီမံကိန်းအကောင်ထည် ဖေါ်ရာ လူကြိုက် များလှပြီး ဆေးရုံများစွာက ပါဝင်လျှောက် ထားကြသည် ။ လူများစွာ ပါဝင်ပြိး ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကြောင့် စရိတ် ၇၀% ပိုပြီးကုန်ကျ လာသည် ။ ဆင်းရဲသားများကိုအဓိကထား အခမဲ့ဆေးကုခြင်းကိုလူလတ် တန်းစားတွေလည်းဝင်ပြီးတန်းစီ၊ ကုသခံယူသည် ။ နောက် ဆုံး လူတစ်ဦးစီတန်းစီနေသော နေရာကိုဒေါ်လာ၁၅ နှုန်းနှင့် တန်းစီရောင်းစား သည် အထိဖြစ်လာသောကြောင့် ဝိုင်းအပြစ်တင်နေကြပါသည် ။ မြိုတော် ဝန်ကတော့ ခုခံပြောဆိုပြီး ယုံကြည် မှုနှင့် ဆက် လုပ်ဆောင်လျှ က် ရှိပါသည် ။ သူက ဂျာကာတာမြို့၏ အုပ်ချုပ် ဗျူရိုကရက် ရေးအရာရှိကြီးများ ကိုစောင့်ကြည့် နေသည် ဟုဆိုပါသည် ။ နာမည် ကျော် အဂတိလိုက် စားလှသော အင်ဒိုနီးရှားမှာ ရာထူးအရှိန်နှင့် ငွေချမ်းသာအောင် မလုပ်သူ၊ သန့်ရှင်းသူအဖြစ် နာမည် ကျော် ပါသည် ။ ၁၅နှစ်တာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာ ဒီနှစ် သန့်ရှင်း၊ ပွင့်လင်းသူ၊ အဂတိမလိုက် စားသူအဖြစ် သူ့ပါတီခေါင်းဆောင် မဂ္ဂါဝတီထက် ပင် လူကြိုက် အလွန်များနေပါသည် ။ ၂၀၀၈ ခုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သမိုင်း အကောင်းဆုံးမြို့တော် ဝန် (၁၀)ဦးစာရင်းဝင် ဖေါ်ပြခံရပါသည် ။ ၂၀၁၁ သမ္မတယူဒိုယိုနို၏ ဂုဏ် ထူးဆောင်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါသည် ။ ၂၀၁၂ တွင် ကမ္ဘာ့ ရာဇဝတ် မှုထူပြောသောမြို့ကို ကမ္ဘာ့ အဆင့်မြို့အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သည့် အတွက် 2012 World Mayor Prize ကမ္ဘာ့ မြို့တော် ဝန် တတိယဆုကိုရရှိခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၃ The City Mayors Foundation လစဉ်ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး မြို့တော် ဝန်ဆုကိုလဲ ရရှိခဲ့ပါသည် ။ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတရွေးကောက် ပွဲ ၂၀၁၄
9. 7/13/2014 JOKOWI Indonesia http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm 9/10 လာမည့် ၂၀၁၄ ဇူလိုင်မှာ အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတရွေးကောက် ပွဲ ရှိပါသည် ။ လက် ရှိသမ္မတ ယူဒိုယိုနိုသည် စစ်ဗိုလ် ချုပ်ဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၄၊ ၂၀၀၉ ရွေးကောက် ပွဲ၂ခုစလုံးကိုDemocratic Party ပါတီနှင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါသည် ။ အင်ဒိုနီးရှားနိင်ငံကိုပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ စနစ်အဖြစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး၊ အဂတိတိုက် ဖြက် သူအဖြစ် နာမည် ရပါသည် ။ ယခင်သမ္မတရွေးပွဲ ၂ကြိမ် အနိုင်ရခဲ့သူ၊ ယခု၂၀၁၄ တွင် အနားယူရမည် ဖြစ်ပါသည် ။ သူ့၏ပါတီက သမ္မတလောင်း မကြေငြာသေးပါ။ သမ္မတရွေးကောက် ပွဲ ၆လကျော် မျှသာ လိုပါတော့ သည် ။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ၅နှစ်တစ်ကြိမ် သမ္မတရွေးကောက် ပွဲ လုပ်ပါသည် ။ အမေရိကန်နိုင်ငံကဲ့ သို့ ပါတီများက သမ္မတလောင်းကိုရွေးချယ် ရပါသည် ။ ပြည် သူလူထုမဲဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ပြီး၊ မဲတစ်ဝက် ကျော် ရသူကိုသမ္မတအဖြစ် ရွေးခံရပါသည် ။ သို့မဟုတ် ရင် မဲအများဆုံးရတဲ့ ထိပ်ဆုံး၂ဦး ထပ်ပြိုင်ရပါသည် ။ မြန်မာသမ္မတ ရွေးပွဲမှာ တစ်မူထူးပါသည် ။ ဒု-သမ္မတ(၃)ဦးကိုစစ်တပ်နှင့်လွှတ် တော် ၂ခုက ရွေးပြီး ထိုအထဲမှတစ်ယောက် ကို မဲပေးရွေးစနစ်ပါ။ ပြည် သူများက သမ္မတ တိုက် ရိုက် ရွေးချယ် ခွင့်မရှိပါ။ တရုပ်နိုင်ငံ ပုံစံ သမ္မတရွေးကောက် ပွဲဖြစ်ပါသည် ။ လက် ရှိဂျာကာတာမြို့ဝန် ဂျိုကိုဝီ၏ ပါတီမှာ Indonesian Democratic Party – Struggle ဖြစ်ပါသည် ။ ပါတီခေါင်းဆောင်မှာ ယခင်သမ္မတဟောင်း မဂ္ဂါဝသီဖြစ်ပါသည် ။ သူမက "၂ကြိမ်တိုင်တိုင် သမ္မတရွေးပွဲမှာ ရှုံးထားသည့် အတွက် ဒီတစ်ကြိမ်မှာ အသက် လဲ ၆၇နှစ်ရှိပြီဖြစ်လို့ ဝင်မပြိုင်တော့ ပါဘူး..နောက် တက် လာတဲ့ ငယ် ရွယ် သူကိုပါတီကရွေးပါမယ် " ဟုဖြေပါသည် ။ လောလောဆယ် သူ့တို့ပါတီက ဂျာကာတာမြို့ဝန် ဂျိုကိုဝီ လူကြိုက် များလျှ က် ရှိပါသည် ။ မူဆလင်ဘာသာဝင် ဂျိုကိုဝီ၏ လူတန်းစားခွဲခြားမှုမရှိကြောင်းကို သူရွေးထားသော လက် ထောက် ဂျာကာတာမြို့တော် ဝန်ကိုကြည့် ပါ။ ခရစ်ယန်၊ တရုပ်အနွယ် Ahok ဆိုသူ၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများကိုခံစားနေရသူဖြစ်ပါသည် ။ ဂျိုကိုဝီသမ္မတအရွေးခံလျှ င် Ahok ဂျာကာတာမြို့ဝန် ဖြစ်မည် ။ အင်ဒိုနီးရှားတွင် အစိုးရ၏ အဂတိတိုက် ဖျက် ရေး KPK အဖွဲ့ရှိပါသည် ။ မကြာခဏ အရေးယူမှုများနှင့် အဂတိပြဿနာ ကျ ဆင်းမသွားပဲ၊ ပိုဆိုးလာသလိုဖြစ်နေပါသည် ။ ဂီတနှစ်သက် သော ဂျိုကိုဝီလက် ခံယူလိုက် သည့် လက် ဆောင် Metallica တေးဂီတအဖွဲ့က လက် မှတ် ထိုးပြီး ပေးခဲ့သော လျှ စ်စစ် ဘော့ စ်ဂီတာ တစ်လက် ရှိပါသည် ။ KPK အဖွဲ့က သိမ်းဆည်းလိုက် ပြီး ပြတိုက် မှာ လူထုကိုပြသထားပါသည် ။ ဂျိုကိုဝီက သူ့ကိုသမ္မတ ဖြစ်ဖို့မြှင့်တင်နေသူများကို.." ကျွ န်တော့် ဘဝဟာ ရိုးစင်းလှပြီး ဘာမှထူးခြားမှုမရှိတဲ့ အတွက် သမ္မတအဖြစ် မထိုက် တန်ပါဘူး ... ဟုပြောဆိုပါသည် ။ နှစ်အနည်းငယ် အတွင်း ဂျိုကိုဝီလူကြိုက် များလာခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ သူ့ကိုသမ္မတအရွေးမခံရလျှ င်လဲ ယိုယွင်းနေသော အင်ဒိုနီးရှားမြို့တော် ဂျာကာတာကိုကမ္ဘာ့ အဆင့် ပြုပြင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ပါသည် ။ မြန်မာပြည် မြို့ကြီးများ မန္တလေး၊ ပုဂံ၊ မော် လမြိုင်၊ တောင်ကြီး၊ မုံရွာ စတဲ့ မြို့များမှာ ဂျိုကိုဝီ ကဲ့ သို့သော အရည် ချင်းရှိသူများစွာ ရှိပါသည် ။ ဂျိုကိုဝီကဲ့ သို့ မြိုတော် ဝန်များစွာ မြန်မာပြည် တွင် ပေါ်ထွက် လာဖို့.. မျှော် လင့်ပါသည် ။ ဇော် အောင်(မုံရွာ)
10. 7/13/2014 JOKOWI Indonesia http://mingalaronline.biz/stories/jokowi.role.model.htm 10/10